Amaqiniso Ngomkhosi Wemfazwe Yomdabu
Amakhwenkwe adrum ahlala ebonakaliswa kwiMfazwe yombutho kunye neencwadi. Bangabonakala bebehamba ngokubaluleka kwimigangatho yemikhosi, kodwa ngokwenene babenenjongo ebalulekileyo kwibala lemfazwe.
Kwaye umlingana wenkwenkwe yomdaka, ngaphandle kokubekwa kwiinkampu zeMfazwe yoLuntu, waba ngumfanekiso ohlala ehlabathini laseMelika. Abadubhu abancinci babanjwe ngamagorha ngexesha lemfazwe, kwaye bahlala bekhumbule kwiingcamango eziqhelekileyo kwizizukulwana.
Iimvumi zaziyimfuneko kwimikhosi yezoBantu
Izigubhu zeRhode Island. Library of Congress
Kwiingqungquthela zeMfazwe yombutho yayiyinxalenye ebalulekileyo yamacandelo empi ngenxa yezizathu ezicacileyo: ixesha abagcine ngalo lalibalulekile ukulawula ukuhamba kwamasoldati kwi-parade. Kodwa abadlumbisi benza enye inkonzo ebalulekileyo ngaphandle kokudlala iimbasa okanye izihlandlo.
Kwiingqungquthela zangekhulu le-19 zazisetyenziswa njengezixhobo zonxibelelwano ezibalulekileyo kwiinkampu nakwiimfazwe. Amadrama kwiManyano kunye neMikhosi ye-Confederate ayadingeka ukuba afunde iindidi ezininzi zeedrama, kwaye ukudlala kweefowuni nganye kwakuya kuthi amajoni afunekayo ukwenza umsebenzi othile.
Benza imisebenzi ngaphandle kweDrumming
Ngoxa abagubha babenomsebenzi othile wokuba benze, bavame ukuhanjiswa kwezinye izinto ekampini.
Kwaye ngexesha lokulwa abadubhi babedla ngokulindelekileyo ukunceda abasebenzi bezonyango, bekhonza njengabancedisi kwizibhedlele zezonyango. Kukho iingxelo zabagubhi abanamaqela ogqirha abancedisayo ngexesha lokulwa , kubancedisa ukubamba izigulane. Omnye umsebenzi obangelisayo: abatsha abancinci bangabizwa ukuba bathathe imilenze ekhuniweyo.
Abaculi babengabambisani, kwaye abazange bathwale izixhobo. Kodwa ngamanye amaxesha izigulisi kunye nabarubhi babandakanyeka kulo msebenzi. I-Drum kunye nefowuni zazisetyenziswa kwiimfazwe ukukhupha imiyalelo, nangona isandi semfazwe sasilunzima ukuthetha okunjalo.
Xa kulwa imfazwe, abadubhu babedla ngokufudukela emva, bahlala kude nokudubula. Nangona kunjalo, iimfazwe zeMfazwe zoMkhosi ziindawo ezinobungozi kakhulu, kwaye abadubulwazi baziwa ukuba babulawe okanye babulawe.
Umculi we-49 yePennsylvania Regiment, uCharley King, wafa ngamanxeba ahluphekileyo kwi- Battle of Antietam xa wayeseneminyaka eli-13 kuphela. UKumkani, owaye wabhalisa ngo-1861, wayesele ekhulile, esebenze ngexesha lePeninsula Campaign ekuqaleni kwe-1862. Kwaye wayedlulile kwinqanaba elincinane ngaphambi kokuba afumane intsimi e-Antietam.
Igosa lakhe lalihlala kwindawo yangasemva, kodwa igobolondo leConfederate elahlayo laqhuma phezulu, lithumela i-shrapnel phantsi kwimikhosi yasePennsylvania. UKumkani osemncinci washaywa esifubeni waza walimala kakhulu. Wafa kwisibhedlele sentsuku ezintathu iintsuku emva koko. Wayeyintlekele emncinci ku-Antietam.
Ezinye izigubhu zaba ziDumo
UJohnny Clem. Getty Images
Izibetha zatsala ingqwalasela ngexesha lemfazwe, kwaye ezinye iimbali zamaqhawe eziqhawe zatshengiswa ngokubanzi.
Omnye wabadumi abadumileyo nguYohnny Clem, owabaleka ekhaya xa eneminyaka eli-9 ubudala ukuba ajoyine umkhosi. UClem waziwa ngokuba ngu "Johnny Shiloh," nangona kungenakwenzeka ukuba wayekuMfazwe waseShilo , okwenzeka ngaphambi kokuba abe nomfaniswano.
UClem wayekho kwi-Battle of Chickamauga ngowe-1863, apho kuthiwa wayesebenzisa isibhamu waza wadubula igosa le-Confederate. Emva kwemfazwe uClem wajoyina i-Army njengejoni, waza waba ligosa. Xa wayethatha umhlala-phantsi ngowe-1915 wayeqhelekileyo.
Omnye umdumisi odumileyo nguRobert Hendershot, owaziwa ngokuba nguDrummer Boy of Rappahannock. Uthi wayekhonza ngobugorha kwi- Battle of Fredericksburg . Ibali lalinceda ngayo ukukhupha amajoni e-Confederate kumaphephancwadi, kwaye kufuneka ukuba yayisigidimi seendaba ezilungileyo xa iindaba ezininzi zemfazwe zifikelela eNyakatho zazixinezelekile.
Kwiminyaka emininzi kamva, i-Hendershot yenza i-onstage, ibetha isigubhu kwaye ixelela amabali emfazwe. Emva kokuvela kwezinye iindibano ze-Grand Army yeRiphabhuliki, inhlangano yezilwanyana zama-Union, inani labathengayo laqala ukungathandabuzeki ibali lakhe. Ekugqibeleni wagqitywa.
Umntu we-Boy Drummer Wayesoloko echazwe
"I-Drum ne-Bugle Corps" nguWinslow Homer. Getty Images
Izidubha zazivame ukubonakaliswa ngabadlali beemfazwe kunye neefoto. Abaculi beemfazwe, abahamba nemikhosi baze benze imidwebo esetyenziswe njengesiseko somsebenzi kumaphephandaba afanekisiwe, ngokuqhelekileyo babandakanywa abadubhi emsebenzini wabo. Umculi omkhulu waseMelika uWinslow Homer, owayegubungele imfazwe njengomculi wekratshi, wabeka umculi kumzobo wakhe weklasi "I-Drum ne-Bugle Corps."
Kwaye impawu yenkwenkwe yodaka yayisoloko ibonakaliswa kwimisebenzi yeengcamango, kubandakanywa nenani leencwadi zezingane.
Indima yomgcini-mboleki yayingabandakanywa kwiibali ezilula. Ukuqaphela indima yomqhubi wemfazwe, uWalt Whitman , xa epapasha incwadi yeengoma zeemfazwe, ezibizwa ngokuba yiDrum Taps .
Izigwenxa Zimfazwe Zishushiso Ngexesha Lemfazwe YaseMelika
I-Murray State University Admissions
I-Top 10 Cool Classic Road Trip Songs
I-Biography kaRobert Noyce 1927 - 1990
Iipopayi ezi-10 eziphezulu zeNirvana Songs